February 2008 | စိုင်းခမ်းထွန်း
8:14 PM | ဤလအတွင်း၌တနင်္ဂနွေသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးကြွက်ဆံပင် အလှပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းထောင်ပါ ကြွက်ဦးရေ အဆမတန် တိုးပွားလာသော ရွှေမြန်ပြည်၌ မဟာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်လာပါမည်။(၂) အချစ်ရေးအီးမေးလ်မှ ပေးပို့လိုက်သော I LOVE YOU ကို အဟုတ်ထင်၍ ဖွင့်ဖတ်ရာမှ အချစ်ဗိုင်းရပ်မိကာ အချစ်စတင် အကောင်ပေါက်မည်။(၃) လူမှုရေးလမ်းသွားရင်းရယ်ပြသော လူတစ်ဦးကြုံက ပြန်ရယ်ပြရန်လိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ မပြုမိခဲ့သော် မေတ္တာပို့ခြင်းခံရမည်။(၄) ယတြာအချစ်ဗိုင်းရပ်သည် နာတာရှည်ရောဂါကိုဖြစ်စေပြီး အမြစ်ပြတ်ရန် ခက်ခဲသည့်အတွက် I LOVE YOU ဗိုင်းရပ်ကို ကာကွယ်ရန် ချောကလက် တစ်ဗူးဆောင်ထားပါ။တနင်္လာသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးက၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င ဖြင့်စသော ကလေးကစားစရာ ပူစီပေါင်းမှုတ်ရောင်းခြင်း၊ ခွေးကလေးများလက်ပေး သင်တန်းဖွင့်ခြင်း၊ ဂွေးသီးသုပ်ရောင်းခြင်း၊ ငှက်ကလေးများကို ယိမ်းအကသင်တန်းပို့ချခြင်းပြုပါ မုချ စီးပွားဖြစ်မည်။(၂) အချစ်ရေးလူပုံအလယ်တွင် လေလည်သံကြား၍ "ဟာ ဘယ်လိုလူလဲ" ဟု ပြောမိရာမှ ဇာတ်လမ်းစမည်။ ကြင်ဖက်ကောင်းဖြစ်မည်။(၃) လူမှုရေးကလေးတစ်ယောက်၏ မုန့်ကို လုစားမိရာမှ အချင်းများမှု ဖြစ်နိုင်သည် ။(၄) ယတြာဗျောက်အိုးတစ်ထုပ်ဆောင်ထားပါ မတရား အော်ဟစ်ငိုကြွေးခြင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပါက ဗျောက်အိုးကို အသုံးချကာ ချက်ချင်း အသံတိတ်အောင် ကြံဆောင်ပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးထူးဆန်းသော ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို အိမ်မက်ထဲတွင် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နှင့်တူသော ဘိုးတော်တစ်ဦးက လာပေးမည်။ ထိုဂါထာကို ရွတ်ပါက ကြမ်းပိုးသည် လိပ်အဖြစ်ပြောင်းပြီး တရုတ်ပြည်သို့ တင်ပို့ရောင်းချကာ စီးပွားတက်ပါမည်။(၂) အချစ်ရေးညနေခင်း လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း တက်နင်းမိသော ငှက်ပျောခွံကြောင့် ဖူးစာရှင်နှင့် နဖူးတိုက် ဒူးတိုက် ဖြစ်ကာ ရင်သပ်ရှု မောဖွယ်ရာ ချစ်ရေးချစ်ရာကို ကြုံမည်။(၃) လူမှုရေးထိပ်ပြောင်နေသော အဖိုးကြီးတစ်ဦးအား ဘတ်(စ်)ကားမှတ်တိုင်တွင် မထင်မှတ်ဘဲ ခေါင်းပုတ် ခြေပုတ် ပြုမိသဖြင့် အချင်းများမည်။(၄) ယတြာဖရဲသီး တစ်လုံးဝယ်ကာ ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်တွင်း သနပ်ခါးပါးကွက် ကွက်ပေးပြီး လက်ဖ၀ါးချည်းသက်သက်ဖြင့် ဘယ်ပြန် ညာပြန် ပါးချကာ "မှတ်ပလားဟဲ့ ... မှတ်ပလားဟဲ့ ..." ဟု အတွင်းမှ အနီရောင်သွေးများ ထွက်လာသည် အထိ ရိုက်ပေးပါ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးဖယောင်းတိုင်လုပ်ရောင်းပါ။ လူများအတွက်မဟုတ်။ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းဖြင့် တနေ့တခြား စီးပွားဖြစ်လာသော ကြွက်များကို ဖောက်သည် သွင်းရန် ဖြစ်သည်။(၂) အချစ်ရေးဖူးစာရှင်နှင့် မုချတွေ့မည့် အချိန်သမယ ဖြစ်သည်။ (မအိပ်မနေ စောင့်ရန်လိုသည်။ အိပ်နေ၍ လွဲသွားလျှင် တစ်သက်လုံး လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး မုချဖြစ်မည်)(၃) လူမှုရေးပုတီးစိတ်နေသော အဖွားကြီးတစ်ဦး၏ ကိုယ်ပေါ် အိမ်မြှောင်တစ်ကောင် ပြုတ်ကျ၍ မတော်တရော် ယမ်းယောင်အော်သည်ကို နားနှင့်ဆတ်ဆတ် ကြားရမည်။(၄) ယတြာအိမ်တွင် လက်ဖက်သုပ်ကျွေးကာ ဒါနပြုပါ။ Tom & Jerry ကာတွန်းခွေကို တစ်နေကုန်ထိုင်ကြည့်ပါ။ကြာသပတေးသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးမယ်ဒလင်အတီးကျင့်ကာ စီးပွားရှာပါ။ ၀ါးလုံးခေါင်းကို ဗုံလုပ်တီးနိုင်သူ၊ မြေအိုးဖြင့် တေးသီနိုင်သူတို့ထံမှ စီးပွားရေးအတတ် ပညာများကို ကြိုးစားသင်ယူပါ။(၂) အချစ်ရေးချစ်သူ၏ နားမလည်နိုင်မှုကို ဖြေရှင်းမရဖြစ်မည်။ (မကြိုးစားပါနှင့်၊ အချည်းနှီးသာ။) ချားရဟတ်စီးစေကာ စိတ်ဖြေခြင်းပြုပါလေ။(၃) လူမှုရေးအိမ်နီးချင် တစ်ဦး၏ စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းကို မခံချင်ဘဲ ကြိတ်မှိတ်ခံ ရကိန်းရှိသည်။ နံနက်စောစော ဘုရားစာ အသံကျယ်ကြီးရွတ်ပြီး ညနေ အပြန်တွင် ဘီယာမူးလာသောအဖြစ် မရှိရန် ဆင်ခြင်ပါ။(၄) ယတြာအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း တစ်ခုဝယ်ပါ။ ချုံ့သောဘက်မှ ကြည့်ပါ။ ပြဿနာမျုားကို သေးငယ်သွားစေနိုင်သော ယတြာကောင်းဖြစ်သည်။သောကြာသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးတောင်ပံဆေးကြောသုတ်သင်ရေး လုပ်ငန်းတည်ထောင်ပါ။ ခြင်အပေါင်းတို့အား တစ်ခါဆေး ၅၀ိ ဖြင့် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးပါ။ တစ်လအတွင်း တိုက်ဆောက်ကားစီးရမည်။ ရွေးချယ်ရမည့် စီးပွားရေးအခြေစိုက်မြို့  ရန်ကုန်၊ မန္တလေး။(၂) အချစ်ရေးကမ္ဘာကြီးကို လုံးသည် ပြားသည် ငြင်းခုံကြရာမှ ချစ်သူနှင့် စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်မည်။(၃) လူမှုရေးလူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးများ ကောင်မလေး ၊ ကောင်လေး တစ်ဦး၏ မျက်စပစ်ခြင်းကို ခံရပြီး ကြည်နူးရမည်။ နောက်ပိုင်တွင်မှ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်သည် ကို အမှန်အတိုင်း သိရသောအခါ အသဲကွဲမည်။(၄) ယတြာခွေးလယားသီးအပွေးများကို စာအိပ်တွင်သေချာစွာ ထည့်ပြီး အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းများထံ စာတိုက်မှ ပို့ပေးပါ။စနေသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထောင်ကာ လက်ဖက်ရည် အလကားတိုက်ပြီး စကားတစ်ခွန်းလျှင် ၅ိ နှုန်းဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုယူပါ။ မုချအောင်မြင်မည်။(၂) အချစ်ရေးချစ်သူနှင့် လိပ်ကန်တွင် လိပ်စာကျွေးခြင်းမပြုပါနှင့်။ ပြောရင်းဆိုရင်း လိပ်ခေါင်းရောဂါ အကြောင်းပြောရာမှ ကွဲကွာခြင်းအထိ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။(၃) လူမှုရေးဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း အိမ်နီးချင်နှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ကိန်းရှိသည်။(၄) ယတြာပါးစပ်ကို ပလာစတာကပ်ပြီး အဓိဌာန် ဥပုသ်စောင့်ရန်လိုသည်။
ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ရေးသောစာ အပိုင်း (၁)
2:36 PM | ခင်မင်မှုနှင့် နောက်ပြောင်မှုသည်တိုက်ရိုက် အချိုးကျပါသည်။ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ...... စိုင်းခမ်းထွန်း...ယုန်ကလေး ...ရေးတဲ့စာအလွမ်းပြေ(မပြေ၍ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်)ချစ်သူရယ် (ရယ်ကို ရယ်ရပါမည် ငို၍မရပါ) ....<?xml:namespace prefix = o />မင်းကို ချစ်ခဲ့သော်လည်း (ခု တခြားတစ်ယောက် ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်) ဖွင့်မပြောရဲတဲ့ (စကားတွေ မျိုချလိုက်သောအခါ) ...ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တွေကြောင့် (ဘ၀ပြောင်းသွားပြီး)(အီးအီးလေးတွေ ဖြစ်သွားတာကို) မင်း အပြစ်လို့ ဆိုမှာလား....။ကိုယ် (ခေါင်းမပါသည်ကို သည်းခံပါရန်) ကတော့...လွမ်းတဲ့စိတ်တွေကို (အကြောင်းပြပြီး)မင်းပေးခဲ့တဲ့ (စားစရာ) ...ဓါတ်ပုံလေး (မစင်ပုံမဟုတ်ဟုဆိုပါသည်) နဲ့ပဲဖြေနေရတယ် ချစ်သူရယ်...ယုန်ကလေး (အမြီးတိုတို)...ဖြိုးငယ် ...ရေးတဲ့စာမေ့မရဘူး အချစ်ဦးရယ် အတိတ်က ဖြစ်ကြောင်း (ကံ ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ဟန်ရှိ၏)စိတ္တဇ အက်ကြောင်းလို (ပတ်ကြားအက်ထဲ ပြုတ်ကျဖူးတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်ပါ)အချစ်ကျောင်းတွေ မတက်ဖူးပေမဲ့ (ကျူရှင်တက်ရင်း ရည်းစားထားခဲ့သူလေ)ပရစ်ဖူးတွေထွက်တဲ့နွေမှာ (လက်သုတ် သုတ်စားတာ မေ့မရပါဘူး)အချစ်ဦးနဲ့ နေဖူးတယ် (ဟီးတာတော့ ဆင်ဆာထဲ ပါသွားတယ်) ..........(သူများဆီက ပိုက်ဆံချေခဲ့ခြင်းများအားလုံး) အိပ်မက်သာဖြစ်လိုက်ပါတော့ အဆိပ်တက်နေတဲ့ဒဏ်ရာ (ကင်းမြီးကောက်ကိုက်၍)နှိပ်စက်တာ မခံနိုင်ဘူး (အိပ်စက်တာရော)တရိပ်ရိပ် တက်လာတဲ့ အတွေးကို (ဒီရေလို့ ထင်ပြီး ထအပြေးမှာ)(ကြောက်စိတ်တွေ) တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချဖို့ဘယ်က အားတွေ ယူရမလဲ (နံရိုးထဲက အားကိုယူပါ ကိုပိန်ပိန်) .....ဒီမိုးတွေ ကျိန်စာမိအောင် (ကျိန်စာတိုက်တဲ့ နတ်ဆိုးလေးဖြိုးငယ်)သူ ညှိုးခဲ့လေသလား (ဘာကိုလဲဟင်)တိုးသွဲ့ပျော့ပျောင်း (ဘာကြီးလဲဟင်)လျပ်ကြောင်းတွေ အလီလီထ (တော်သေး နှပ်ကြောင်းတွေဆို မျက်နှာသစ်)ငါ့ရင်ထဲ အတိုးနဲ့ ရွာချနေတုန်းပဲ (နေ့ပြန်တိုးဆို သေပြီဆရာ) …..ဖြေစရာမကျန်တော့တဲ့ (စာမေးပွဲမေးခွန်း)(တစ်ပုဒ်မျှ မရတော့) သေရွာပြန် အတိတ်တို့ အတွက်နေရာမှာပဲ ပြန်အိပ်လိုက်ရင် (စိတ်ပုတီး စိတ်မယ်ကြံ)(အိပ်ဆေးနဲ့ အတင်းအိပ်တော့) ရင်ခုန်သံတို့ တိတ်စေရဲ့ ကြိတ်မှိတ်ကာ ဆုတောင်းမိသေးတယ် (သေတော့ မသေပါစေနဲ့)…..နောက်ဆုံးတော့ (ကြံရာ မရတာနဲ့) ....(မနှဲလေးရဲ့) နတ်တေးသံပြိုင်ပြိုင်မနှောပဲဝိဥာဉ်တွေ ခြွေတဲ့တောမှာ (သိုင်းလောကစိန်ခေါ်သံမှ လင်းနို့မင်း ရောက်မလာခင်)(ရှမ်းခေါက်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့) ခေါစာတွေ ပစ်ကျွေးလိုက်ရတယ်(ဗေဒင်ဆရာနဲ့) ဓါတ်ရိုက်ထားတဲ့နှလုံးသားကိုပေါ့……ဖြိုးငယ် (ကဗျာမှော်အောင်သူ)...ချီရွန် ( ပုလဲ ) ...ရဲ့ စာ“ စာမျက်နှာ အမှတ် ___ ”ကျစိမ့်တခွက် (၁၇၀ိ) နဲ့ငါ့ မနက် (၁၀ နာရီး ခွဲအပြီး) ဖဲကြိုးဖြတ်ခဲ့ (တုန်းက အိပ်ရေးမ၀သေးတာတွေ) ..ဘ၀က စာဖတ်နေတုန်း (ချီရွန် က ၀လုံးတွေရေးတယ်)အသက်က ၂၀၀ တစ်ဝက် သာနေရရင် …. ဖွာ နေတဲ့ ဆေးလိပ်တို (တင်မိုး ငိုရင်ပြန်ပေးမယ်)မာတိကာ မပါတော့ (မာတုကာမ ကိုပဲ ချစ်လိုက်ရ)ဘယ်စာမျက်နှာမှ (ကျော်ဖတ်ရင် အဆင်ပြေမလားစဉ်းစားရင်း)နင်နဲ့ငါ (အစားထိုးပြီး) ပေါင်းရပါ့မလဲခုချိန်တော့ (အိပ်ခါနီးမို့) .. ..အလွမ်း (တေးတစ်ပုဒ် ကိုဆိုရင်း) ခွေး တစ်အုပ်နဲ့ ( ငါ့ညကို ) လိုက်လိုက် ဟောင်ရတာ ……..မိုးချုပ် (လာတာနဲ့ ခွေးတစ်အုပ်ကို ငါဗိုလ်လုပ်ရင်) တ ... ၀ုတ် ... ၀ုတ် နဲ့ ဟောင် လိုက်ပါတယ်ချီရွန် ( ပုလဲ ) - (ရယ်ရင်ရွဲ) ကြာနီကန် ဆရာတော်၏ တရား...Saing Khan Tun
8:56 AM | Post အသစ်မတင်ဖြစ် ဖြစ်နေပါသည်ပါ။အကြောင်းအရာလေးရအောင် အော်ပေးကြပါ။Saing Khan Tun
12:25 AM | ကဏ္ဍ
သူတို့ဆီက ဟာသ အပိုင်း (၆)
9:42 PM | ကဏ္ဍ
တစ်ခါက မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးက မြို့ နယ်ကိုယ်စာလှယ် တစ်ဦးခန့်ဖို့အတွက် အင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်တယ်။ မစ္စတာဂူးမာကို အင်တာဗျူးတော့ .....
မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ။ ။ "ဟုတ်ပြီ မောင်မင်းရေ .....တစ် နဲ့ တစ် ပေါင်းရင် ဘာရလဲ ကဲဖြေကွာ။"
မစ္စတာဂူးမာ ။ ။ "ဆယ့်တစ် ရပါတယ်။"
မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ။ ။ "ငါဆိုလိုတာ အဲဒါတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းမှန်တယ်။ အင်း... နောက်မေးခွန်း တစ်ခုကွာ။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပါတ်မှာ T နဲ့ စတဲ့ ရက်က ဘယ်ရက်တွေလဲ။"
မစ္စတာဂူးမာ ။ ။ "ဒီနေ့ (Today) နဲ့ မနက်ဖြန် (Tomorrow) ပါ။"
မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာ သူဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားမိခဲ့တဲ့ အဖြေအတွက် အံ့သြတကြီး ဖြစ်သွားတယ်။
မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ။ ။ "ဒီတစ်ခါသေသေချာချာနားထောင်။ အေဗရာဟင်လင်ကွန်းကို ဘယ်သူ သတ်တာလဲ။"
မစ္စတာဂူးမာဟာ အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီး အချိန်တော်တော်ကြာအောင် စဉ်းစားနေတယ်။ နောက်ဆုံး မစ္စတာဂူးမာဟာ"ကျွန်တော် မသိပါဘူးလို့" ၀န်ခံလိုက်တယ်။
မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ။ ။ "ဒါလေးတောင် မသိဘဲနဲ့များ မင်းက ဘာကြောင့် ခုထိ အိမ်မပြန်သေးဘဲ ဒီမှာဘာဆက်လုပ်နေတာလဲ"
မစ္စတာဂူးမာဟာ အင်တာဗျူးက ထွက်လာပြီး သူ့ရလဒ်ကို စောင့်နေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီ ရောက်တော့ ... သက်ပြင်းမောကြီး တစ်ခုကိုချလိုက်ရင်း ...
"ငါတော့ ဒုက္ခ အကြီးအကျယ်ရောက်ပြီဟေ့။ အလုပ်လုပ်ဖို့ စတဲ့နေ့မှာပဲ လူသတ်မှုကြီးတစ်ခုမှာ ပတ်သက်မိရက် ဖြစ်နေပြီ။"
8:12 PM | ကဏ္ဍ
ဒုက္ခ အတူတူခံနိုင်လား ...
သူတို့ဆီက ဟာသ အပိုင်း (၅)
7:25 PM | ကဏ္ဍ
မောင်မောင်ကျားတို့ လူပျိုရည် မပျက်ဖို့ Underware အကောင်းစားလေး
10:29 PM | आपकလေးစားမှုကို အရင်းခံ၍ ဖော်ပြပါသည်။Saing Khan Tun Read User's Comments(0)
11:01 PM | သုတေသနတစ်ခုတွင် ယောက်ျားများရေအိမ်မှ အထွက် စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုပြုရာ ..........ယောက်ျား ၉၂ % သည် ရေအိမ်မှ သူ့ကိစ္စအပြီးတွင် လက်ဆေးသည်ဟု ပြောကြသည်။၃၄ % က လိမ်ကြသည်။အပေါ်ကပုံမှာ လူ ၉ ယောက်ရှိတယ် ရှာကြည့်ပါဦး။အပေါ်က ဆင်ကြီးလားဗျ။ လက်ကြီးလာဗျ။Saing Khan Tun
သူတို့ဆီက ဟာသ အပိုင်း (၄)
7:20 PM | ကဏ္ဍ
ရဲအရာရှိနေရာအတွက် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ရဲအရာရှိလောင်းတွေကို လူတစ်ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံပြပြီး ....
ရဲအရာရှိ ။ ။ မင့်ရဲ့  သိမြင်နိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်မှာလေ။ ဒီပုံကိုကြည့်ပြီး မင်းမြင်တဲ့ ကောက်ချက်ချပါဦး။ပထမရဲအရာရှိလောင်း ။ ။ ဒီလူမှာ နားရွက်တစ်ဖက်မရှိဘူးဗျ။ရဲအရာရှိ ။ ။ ထွက်သွားတော့။ဒုတိယ ရဲအရာရှိလောင်း ။ ။ ဒီလူမှာ တကယ့်ကို နားရွက်တစ်ဖက်မရှိဘူးဗျ။ရဲအရာရှိ ။ ။ မင်းလည်း ထွက်သွားတော့။
တတိယ ရဲအရာရှိလောင်းကို ပထမနှစ်ယောက်ကပြောတယ်။ "အရာရှိက ဓာတ်ပုံထဲက လူမှာ နားရွက်တစ်ဖက်တည်းရှိတာပြောရင်မကြိုက်ဘူး။" "ဟာ ဟုတ်လား။ ပြောပြတာကျေးဇူးပဲ။"တတိယအရာရှိလောင်းဟာ ဓာတ်ပုံကိုသေသေချာချာကြည့်တယ်။ စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာတယ်။ ပြီမှ
တတိယ ရဲအရာရှိလောင်း ။ ။ "ဒီလူမျက်ကပ်မှန်တပ်ထားတယ်ဗျ။"ရဲအရာရှိ ။ ။ "ကောင်းလိုက်တဲ့ ကောက်ချက်။ ဘယ်လိုများစဉ်စားလိုက်တာလဲ။ လင်းစမ်းပါဦး။"တတိယ ရဲအရာရှိလောင်း ။ ။ "ဟာ ... ရှင်းပါတယ်ဗျာ။ ဒီလူ နားရွက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ဘယ်လို မျက်မှန်တပ်မလဲဗျ။"
6:32 PM | ကဏ္ဍ
သူတို့ဆီက ဟာသ အပိုင်း (၃)
3:30 PM | ကဏ္ဍ
အလုပ်လာလျှောက်သူ တစ်ယောက်ရဲ့  စာရိတ္တကို သိချင်လို့ အလုပ်ရှင်ကမေးတယ်။
အလုပ်လျှောက်သူ ဂုဏ်ယူစွာ ပြန်ဖြေလိုက်ပုံက
"ဘယ်တော့မှ မမိလို့ပါ ခင်ဗျ။"
အလုပ်ရှင်။ ။ ဒီအလုပ်အတွက် စိတ်ချရတဲ့ လူတစ်ယောက် လိုနေလို့ပါ။
အလုပ်လျှေက်သူ ။ ။ ဟာ ဒါဆို အံကိုက်ပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အလုပ်တုန်းကလေ ကျွန်တော်က အရာရာမှာ အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်နေတော့ အလုပ်ရှင် ကပြောတယ်။ "မင်းကတော့ တော်တော် စိတ်ချရတဲ့ကောင်ပဲကွာ" တဲ့။
အလုပ်ရှင် ။ ။ လူလေး ... မင်း လုပ်ငန်းတာဝန် အမျိုးမျိုးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား။
အလုပ်လျှောက်သူ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်က ၄ လ အတွင်း လုပ်ငန်း ၁၀ ခု ပြောင်းလုပ်ခဲ့သူပါ။
အင်တာဗျူးတစ်ခုကို အချိန်အတော်နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတဲ့ စီးပွားရေးဘွဲ့ ရစ လူငယ်လေးတစ်ဦးရဲ့  အင်တာဗျူးမှာ ...
လူငယ် ။ ။ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၁၂၅ ၀၀၀ ရယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့  အမြတ်အပေါ်မူတည်းပြီးရတဲ့ အပိုဆောင်းလေးရယ်ပေါ့ဗျာ။
အင်တာဗျူးသူ ။ ။ အင်း ... ကောင်းပြီလေ ညီလေး ပြောသလိုပဲပေးပါမယ်။ ဒီကုမ္ပဏီက ညီလေးကို တစ်နှစ်မှာ ၅ ပတ် ရက်ရှည် ပိတ်ပေးမယ်။ ဆေးဝါးကုသ မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ် မှန်သမျှ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ အငြိမ်းစား ယူတဲ့အခါ လစာရဲ့  ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထောက်ပံ့ပါဦးမယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်သက်တမ်း ၂ နှစ်ရှိပြီဆိုရင် ဇိမ်ခံကားတစ်စီး ထုတ်ပေးမှာပါ။
Saing Khan Tun Read User's Comments(1)
11:01 PM | ကဏ္ဍ
10:08 PM | (၁) ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) မတ်လ(၃) ဧပြီလ
ရှမ်း တုပ်ဆူ စင်ကာပူ ၂၀၀၈
10:12 PM | ကဏ္ဍ
3:00 PM | ကဏ္ဍ
စင်ကာပူရောက် ရှမ်းလူငယ်များ၏ တုပ်ဆူ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ
12:38 AM | SlideShow Created At SeekCodes.com
ရှမ်းတုပ်ဆူ စင်ကာပူ ဗွီဒီယို
12:19 AM | Read User's Comments(0)
12:13 AM | ကဏ္ဍ
စင်ကာပူ တရားစခန်း (၇.၂.၂၀၀၈)
12:57 PM | ဒီနေ့မနက် ၆း၃၀ လောက်ထပြီးရေချိုး၊ မိုင်လိုသောက်ပြီး တရားစခန်းသွားဖို့ အင်တာနက်ကနေ လမ်းညွှန်မြေပုံရှာတယ်။ မနေ့က ကိုဇော်မိုးစံ ပို့ပေးလိုက်တဲ့ အီးမေးလ် ထဲမှာ အချိန်ရော နေရာရောပါတယ်။ သူစာကို ဖေါ်ပြပါဦးမယ်။
Dear sisters and brothers in the Dhamma,We, SMC have arranged four days meditation retreat in Singapore especially for those who were unable to go to Malaysia for full time retreat. This meditation session will be from 8:00 am to 8:00 pm from 07 Feb to 10 Feb 2008. Lunch will be provided for all yogis. Anyone who received this email can directly go to SMC at 735 (A) & (B), Old Havelock Road Singapore 169562. No registration is needed. This yogis list will be sent to in-charge of the retreat. Those who would like to offer lunch dana, please kindly contact to Ko Maung Maung Thet at 98979584. Please refer to attachment for your guide to SMC. If any queries, pls call Ko Maung Maung Thet.http://www.smcmeditation.org/May you have peaceful meditationWith Warmest Metta,Zaw Moe SanSatipatthana Meditation Centre
ကိုဇော်မိုးစံရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က ၉၁၇၁၄၃၅၀ ပါ။ တရားထိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်သွယ်နိုင်အောင်လို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုဇော်မိုးစံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီကရတယ်။ သူနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စကားပြောရင်း စပ်မိတာနဲ့ တရားထိုင်ဖို့ဖြစ်လာတာ။
မနက် ၈း၄၅ လောက်မှာ SMC (Satipatthana Meditation Centre) ကိုရောက်တယ်။ ယောဂီအစ်မကြီး ၂ ယောက်လမ်းလျှောက်လာတာတွေ့လို့တော်သေးတယ်။ အဆောက်အဦး က ဆိုင်းဘုတ်တွေဘာတွေ ကြီးကြီးမားမား တပ်မထားတော့ ရှာဖို့မလွယ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် က Block နံပါတ်မှတ်မလာမိဘူးလေ။
ဘုန်းတော်ကြီးက ၀ိပဿနာ ရှုမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောတရားလေး ပြောပြတယ်။ လောကမှာ ရုပ် နဲ့ နာမ် ဆိုတဲ့ ပညတ်သဘော ၂ ခု ကနေ ဉာဏ်စဉ် အဆင့်မြင့်လာအောင် လေ့ကျင့်ရပုံလေးကို ပြောတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်ပေးတရားခွေ ဖွင့်ပေးပြီး တရားမှတ်ခိုင်းတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာတော်ဟောတာကို သေချာနားလည်အောင် စဉ်းစာနေမိတယ်။ စာဖတ်သူတွေ စိတ်ပါမယ်မထင်လို့ အကျယ်တ၀င့်လည်း မရေးချင်ဘူး။ တရားထိုင်ရင် ကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိလာတဲ့ အချက် (၅) ချက်ရှိတယ်။ ပြောပြမယ်နော် ...
(၁) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုပ် နဲ့ နာမ် ဟာ အမြင်အာရုံကို အမှီပြုဖြစ်ပေါ်တဲ့ အဆင်း၊ အကြားအာရုံကို အမှီပြုဖြစ်ပေါ်တဲ့ အသံ၊ အနံ့အာရုံကို အမှီပြုဖြစ်ပေါ်တဲ့ အနံ့၊ ချို၊ ငံ၊ ခါး စတဲ့ ရသာအာရုံကို အမှီပြုဖြစ်ပေါ်တဲ့ အရသာ၊ ထိတွေ့အာရုံကို အမှီပြု ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အထိအတွေ့၊ စိတ်ကူးအာရုံပေါ် အမှီပြုဖြစ်ပေါ်တဲ့ သိစိတ် (၂) အဲဒီ အာရုံ ၆ ပါးမှာ ပြင်ပအကြောင်းအရာ တစ်ခုခု အကျိုးသက်ရောက်လာတဲ့အခါ ....
(၃) မိမိ နှစ်သက်လျှင် လိုချင်သည့် လောဘစိတ် ဖြစ်ပေါ် ....
(၄) မိမိ မနှစ်သက်လျှင် စိတ်ဆိုးသည့် ဒေါသစိတ် ဖြစ်ပေါ် .... တတ်သော သဘာဝရှိသည်။
(၅) အဲဒီ လောဘ နဲ့ ဒေါသ ကြောင့် သတိ နဲ့ ဆင်ခြင်နေထိုင်မှုမရှိရင် ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေရနိုင်တယ်။
(၁) မိမိ နှစ်သက်တဲ့ အာရုံ ဖြစ်စေသော ရုပ်၊ ပစ္စည်းတွေကို လိုချင်မှုဆိုတဲ့ လောဘကြောင့် ရအောင် အားထုတ်မှုပြုတယ်။
(၂) လောကမှာ ဒီလို မိမိ နှစ်သက်တဲ့ အာရုံ ဖြစ်စေသော ရုပ်၊ ပစ္စည်းတွေကို လိုချင်သူဟာ မိမိတစ်ဦးတည်း မဟုတ်။
(၃) ဒါကြောင့် မိမိ လိုတာရအောင် ယှဉ်ပြိုင်ကြိုးစား အားထုတ်ရမှုတွေဖြစ်လာတယ်။
(၄) ရ တဲ့သူရှိတယ်။ မရတဲ့သူရှိတယ်။
(၅) ရတဲ့သူက ၀မ်းသာမယ်။ ပြန်ဆုံးရှုံးမှာ စိုးရိမ်မယ်။
(၆) မရတဲ့သူက ပူဆွေးမယ်။ မနာလိုဖြစ်မယ်။
(၁) မိမိ လိုအပ်မှု အစစ် အမှန်ကို သိမြင်အောင်ဆင်ခြင်ရမယ်။
(၂) မိမိ လိုအပ်တာထက် ပိုမို ရယူသိမ်းပိုက်ထားရင် ...
(၃) အခြားလိုအပ် သူတွေ ပူဆွေးမယ်။ မရရင် ဒေါသဖြစ်မယ်။
(၄)လွန်လွန်ကဲကဲ လိုအပ်၊ လိုချင် လာရင် ...
(၅) တရားသဖြင့် ရလမ်းမလွယ်ပါက ဆဲဆို၊ ခိုး၊ ဆိုး၊ တိုက်ခိုက်၊ သတ်ဖြတ် လုယက်ကြမယ်။
(၁) ဆဲဆို၊ ခိုး၊ ဆိုး၊ တိုက်ခိုက်၊ သတ်ဖြတ် မှုတွေဟာ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်လာရင် မိမိကို လည်း ကူးစက် ပူလောင်မှု ဖြစ်လာစေမှာဖြစ်တယ်။
(၂) မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း သတိနဲ့ မနေရင် ...
(၃) ပြင်ပမှ ရိုက်ခတ် သက်ရောက်လာသော တစ်စုံတရာသော မနှစ်သက်ဖွယ်ရာ အာရုံကြောင့် အမှတ်တမဲ့ (သတိဖြင့် စောင့်ကြပ်ထားခြင်း မဟုတ်သောကြောင့်) မကောင်းမှု ကို ပြုမိမှာဖြစ်တယ်။
(၁) အဲဒီလို အမှားကို မပြုမိအောင် သတိဆင်ခြင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ သတိထားနေဆဲခဏမှာအမှားကို မပြုလုပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သတိထားတဲ့ ခဏလေးတွေကို ရှည်ကြာလာအောင် ... လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရင်ရပါတယ်။
(၂) သတိထားမှုလေးတွေ ဆက်ကာဆက်ကာ ... ဖြစ်နေရင် အမှားမလုပ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီ သတိထားနေတာလေးဟာ ၀ိပဿနာပါပဲ။
(၃) စူးစိုက်လေ့ကျင့်ပြီး ပေါက်မြောက်သွားရင် .... သတိအစဉ်ဟာမပြတ်တော့ဘူး။ အမှားလုပ်မိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် ..... သတိအစဉ်မပြတ်ဖို့ဟာ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ .... ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုထဲ စီးဝင်မျောပါရင်း .... ဒီဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်အတွင်း ... မိမိဟာ ... စိတ်တွေ ဘယ်လောက်လွှင့်ပါခဲ့တယ်.... ပြင်ပအာရုံဟာ မိမိ အပေါ် ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုး သက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကို .... ဆင်ခြင်ကြည့်ရင် လွယ်လွယ်မြင်နိုင်ပါတယ်။ လူဘ၀ဆိုတာ ... တကယ်တော့ အသေးစိတ်ခြယ်မှုန်း တင်ဆက်နေတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးပါပဲ။
အဖေ ပြောပြတဲ့ အဖေ့ပုံပြင်
10:56 PM | ကဏ္ဍ
ကျွန်တော့ဖေဖေက ဦးကျော်ညွန့်ပါ။ အဖေ့ဘ၀က ကြမ်းတယ်။ အဖေပြောပြောပြလို့ အဖေ့အကြောင်းတွေ နားထောင်ခဲ့ရတာ ငယ်လေးကတည်းကပါပဲ။ အဖေတို့ မွေးချင်းမောင်နှမ ရ ယောက်ရှိတယ်။ ယောက်ျားလေး ၄ ယောက်၊ မိန်းကလေး ၃ ယောက်။ အကြီးဆုံး ကျွန်တော့် ဘကြီး ဦးကံညွန့်၊ အလတ် ဘကြီးဦးအောင်ညွန့်၊ အကြီးဆုံးအစ်မ ကြီးကြီးဒေါ်တင်အေး၊ ကျွန်တော့်ဖေဖေ ဦးကျော်ညွန့်၊ ဘဒွေး ဦ .... (ကလေးဘ၀သေဆုံး) ၊အရီး ဒေါ်တင်နု၊ အရီး မတင်စိန် (အပျိုကြီး) တို့ပါပဲ။
အဖေရဲ့အဖေက ဦးထွန်းပွဲပါ။ အိုက်ပွဲ လို့ခေါ်ကြတယ်လို့ အဖေက ပြောတယ်။ အဘိုးကို ကျွန်တော် မမီဘူး။ ကျွန်တော်မွေးတော့ အဖိုးမရှိတော့ဘူး။ အဖေရဲ့အမေက ဒေါ်မြမေ ကျွန်တော်မြင်ဘူးလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော် ၇ နှစ်အရွယ်လောက်မှာ အဘွားဆုံးတယ်။ အဘွား အသားဖြူဖြူ ခပ်၀၀ ရှမ်းအဘွားကြီး။ ကျွန်တော့် ဘဒွေး ခင်အောင်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ပွဲကို အသွား မူးလဲတယ်။ သွေးတိုးရှိတဲ့အဘွား အဲဒီနေ့မှာဘဲ ဆုံးတယ်။ နောက်မှ အဖေပြောပြလို့ သိရတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် ဘကြီးရှိတဲ့ အင်းတော် မှာ ကျောင်းတက်နေတာပါ။ ဒုတိယတန်း ထင်ပါတယ်။
အဘွားသေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖေပြောပြတာမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီနေ့က အဘွားက အဖေ၀ယ်ပေးထားတဲ့ ထမီအသစ်ကလေးဝတ်လို့ ဘဒွေး ခင်အောင်တို့ မင်္ဂလာသွားတယ်။ မင်္ဂလာပွဲရောက်တော့ လက်ဖွဲ့ ပေးလို့အပြီး မင်္ဂလာ ထမင်းစားဖို့လုပ်တုန်း မူးလဲတာ။
1:09 PM | ဤလအတွင်း၌တနင်္ဂနွေသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးသူတောင်းစားတစ်ဦးနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပါ။ အရင်းမစိုက်ရဘဲ အမြတ်ရမည်။(၂) အချစ်ရေးလူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးများ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွင် အိမ်ထောင်ကျမည်။(၃) လူမှုရေးအတင်းပြောခြင်းခံရသည်ကို သိရှိက စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မည်။(၄) ယတြာလူတွေ့တိုင်းပြုံးပြပါ။ "ဒီကောင်ရူးသွားပြီထင်တယ်" ဟု အပြောခံရသည်အထိ မပျက်မကွက် သတိဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်။တနင်္လာသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးချဲထီထိုးပါက အရှုံးများမည်။(၂) အချစ်ရေးOnline ပေါ်တွင် ချစ်စကားပြောရန် ကြံစည်ခြင်းခံရမည်။(၃) လူမှုရေးထင်မှတ်မထားသူတစ်ဦး၏ လေလည်သော အနံ့အား ရှူမိကာ စိတ်မကြည်မသာဖြစ်ရမည်။(၄) ယတြာနှာရှူဘူးတစ်ခုဆောင်ပါ။ အသံကြားသည်နှင့် အမြန်ကာကွယ်မှုပြုရန်လိုသည်။ အသံတိတ် လုပ်ကြံခြင်းခံရပါက ပြင်းထန်ဆိုးရွှားသော ၀မ်းနည်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။အင်္ဂါသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေး ကန်စွန်းရွက်စိုက်ရောင်းကာ စီးပွားရေးဈေးကွက်ချဲ့ထွင် ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။(၂) အချစ်ရေးလူငယ်လူရွယ်မောင်မယ်များ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးများ၏ လက်သီးပုန်းကို သတိထားရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။(၃) လူမှုရေးငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတစ်ဦးက ငယ်ငယ်က ဂွေလှိမ့်တမ်းကစားစဉ် ပုဆိုး၊ ထမီ ပြေကျသည်ကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းတင်ပြကာ အရှက်ခွဲခံရမည်။(၄) ယတြာငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းများနှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲလုပ်ခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၀ိုင်းထိုင်ခြင်းကို တတ်အားသမျှရှောင်ပါ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေး ဆန်ဈေးတက်ခြင်း၊ မီးပျက်ခြင်းတို့ကြောင့် ထမင်းငတ်ခြင်းဖြစ်မည်။(၂) အချစ်ရေး ကံကောင်းပါသည်။ (အိမ်ထောင်ကျရန်ကား စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ ကဲ့သို့သော သတ္တိမျိုးမွေးရမည်။)(၃) လူမှုရေးနဖာချေး ကလှော်စဉ် အရေးတကြီး ဖုန်သံကြောင့် ချက်ချင်း လျှပ်တပြတ် လှုပ်ရှားမှုကိုရှောင်ပါ။ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုရှိနိုင်သည်။(၄) ယတြာဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ချိုလိမ် (သားသားမီးမီး တို့ထံမှ မသိအောင် တိတ်တဆိတ်ယူငင်ကာ) လှူဒါန်းခြင် ကုသိုလ်ပြုပါ။ကြာသပတေးသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေး လမ်းပေါ်ထွက်ပိုက်ဆံရှာပါ။ ဗီတာမင်ဒီ အပြည့်အ၀ရကာ အသားမည်းခြင်းပါ အပိုဆုရမည်။(၂) အချစ်ရေး "အချစ်ရေ" "အချစ်ရေ" ဟု လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး အကျယ်ကြီးအော်ကာ အူယားဖားယား ပြေလွှားခြင်းပြုပါ သနားသူပေါ်လာပါမည်။ ချစ်ခြင်းအစ သနားခြင်းကဟု ဆိုရိုးရှိပါသည်။(၃) လူမှုရေး ၀မ်းနှုတ်ဆေးစားပြီး ဘတ်စကားစီးစဉ် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင် ဖြစ်ကိန်းရှိသည်။ သတိကြီးကြီး ထားပါ။(၄) ယတြာ ဘတ်စကားစပါယ်ယာ၏ အားနည်းချက်ကိုရှာဖွေပါ။ ကွမ်းယာအသင့်ဆောင်ထားပါ။ အဆင်ပြေနိုင်သည်။သောကြာသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေး အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်စဉ် ထင်မှတ်မထားသော အမှိုက်ထုပ်ကြီးအားရောင်းကာ စီးပွာတက်နိုင်သည်။(၂) အချစ်ရေး အဝေးရောက်ချစ်သူက ပို့လိုက်သော ဗယ်လင်တိုင်းဒေး လက်ဆောင်ဗူးကြီးရမည်။ အထုပ်ဖွင့်စဉ် သတိကြီးစွာထားရန်လိုသည်။ စပရိန်လက်သီးပုန်း ထွက်လာနိုင်သည်။(၃) လူမှုရေး လမ်းလျှောက်နေစဉ် "ဖင်မှာ အပေါက်ကြီးနဲ့" ဟု အပြောခံရကိန်းရှိသည်။(၄) ယတြာ အ၀တ်ဟောင်းများကို စွန်ကြဲပါ။ အပြောခံရပါက လှည့် မကြည့်ပါနှင့် ထပ်မံ အရှက်ကွဲနိုင်သည်။ "လူတိုင်းမှာ ရှိတာပဲ" ဟု ပုတီး ၃ ပတ်စိတ်ပါ။စနေသားသမီးများ(၁) စီးပွားရေးရှေးဟောင်းခြင်ဖမ်းသိုင်းကျမ်းကို မထင်ဘဲ လမ်းတွင်ခလုပ်တိုက်မိပြီး ရမည်။ ခြင်ဖမ်းသိုင်းဂိုဏ်ထောင်ကာ ဂိုဏ်ချုပ်လုပ်ပါ ဂိုဏ်းသားများ၏ အားထုတ်မှုဖြင့် မဟာစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကြီးရရှိပြီး အဖြူရောင်သိုင်းဂိုဏ်အဖြစ် နာမည်ထင်ရှားမည်။(၂) အချစ်ရေးဆတ်စလူးမလေးမျာ၏ ရင်ခုန်သံကို အလှူခံ မဏ္ဍပ်၏လောက်စပီကာမှ တဆင့် ကြားသိရမည်။ ဖူးစာရှင် လူပျိုကြီးက အရဲစွန့်သော လုပ်ရပ်ကြောင့် အဖြေပေးရကိန်းရှိသည်။(၃) လူမှုရေး အဘွားကြီးတစ်ဦးအား အဘိုးကြီးက မွှေးမွှေးပေးစဉ် နှပ်ထွက်ကာ ပေးကျံနေသောနှပ်အား သုတ်ပေးရကိန်းရှိသည်။(၄) ယတြာလမ်းလေးခွတွင် အလံထောင်ကာ လက်ပန်းပေါင်းခတ်၍ "သတ္တိမရှိတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့" "မမိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့" ဟု တစ်လောကလုံးကိုစိန်ခေါ်ပါ။
၂၀၀၈ ဖေဖေါ်ဝါရီလ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာပြက္ခဒိန်
8:48 PM | လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉၂ နှစ်က ဒီလရဲ့ ၁၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ .. တော်လှန်ပြောင်းလဲပစ်တတ်တဲ့ သဘာဝရှိတဲ့ ၁၃ ဂဏန်းသမား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အလောင်းအလျာ မောင်ထိန်လင်းလေးကို မွေးဖွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၃ ဂဏန်းသမားတွေဟာ ၁၃ ဂဏန်းလိုပဲ ထူးဆန်းတဲ့ သဘာဝ အကျင့်စရိုက်တွေရှိတယ်။ အများနဲ့မတူတဲ့ ထိုးဖောက်သိမြင်နိုင်တဲ့ သတ္တိပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကို လိုလားသူ သမားရိုးကျမှခွဲထွက်သူများဖြစ်တယ်။